कुनै पनि मालिक, तपाईंको चार खुट्टे पाल्तु जनावर को स्वास्थ्य हेरचाह, निर्धारित स्क्यानहरू लागि डाक्टर तिनीहरूलाई नियमित भ्रमणमा। तर जीवन कहिलेकाहीं त्यहाँ अवसर परिस्थितिहरू, जनावरको अचानक बिरामी पतन र उहाँले तुरून्त विशेषज्ञ सहायता प्रदान गर्न आवश्यक जब छन्। यस्तो अवस्थामा यो आतंक शान्त रहन र धेरै महत्त्वपूर्ण छ। आजको लेख पढेपछि तपाईं एक्स-रेज कुकुर गर्न कसरी र कहाँ सिक्न हुनेछ।
केही अवस्थामा, यो प्रक्रिया आवश्यक छ?
यो बिना केही अवस्थामा छ, तुरुन्तै आरक्षण गर्न आवश्यक छ एक्स-रेज सही निदान स्थापित गर्न व्यावहारिक असम्भव छ। यो अनुसन्धान विधि को मद्दतले जठरांत्रिय पर्चा, osteomyelitis, भंग, osteosarcoma को बाधा र कंकाल अन्य रोग परिवर्तन सहित धेरै रोगहरु, प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ।
एक एक्स-रे को दिशा कुकुर जनावर को निरीक्षण सञ्चालन गर्ने पशुचिकित्सा दिन्छ। सामान्यतया, यो आशङ्का भंग, ट्यूमर वा पाचन पर्चा को बाधा को घटना मा हुन्छ।
को निदान के उपकरण प्रयोग गरिएको छ?
पशु चिकित्सा को सबै भन्दा आधुनिक क्लीनिक मा नवीनतम मोडेल वाहन छ। डिजिटल उपकरण प्रयोगको माध्यमबाट यसलाई स्पष्ट फिल्म र स्क्रिनमा देखिने हो कि उच्च गुणस्तरीय तस्बिर प्राप्त गर्न सम्भव छ।
यो प्रविधी को मद्दतले लिइएका तस्वीर, क्लिनिक मा भण्डारण गरिएका वा ग्राहक पठाइएको गर्न सकिन्छ। ट्वीक्स यसलाई जहाँ उत्कृष्ट विवरण स्पष्ट देखेका छन् गुणस्तर तस्बिरहरू विस्तार गर्न सम्भव बनाउन।
एक निदान लागि प्रयोग एक्स-रेज?
यो प्रविधी तपाईं सही भंग प्रकार निर्धारण र वरपरको नरम Tissues गर्न क्षति को डिग्री आकलन गर्न अनुमति दिन्छ। त्यसैले तपाईं आन्तरिक रक्तस्राव, सुनिंनु र putrefaction, हड्डी टुकडे कारण विकास को घटना को जोखिम कम गर्न सक्छ।
यो भाँचिएको करङहरु एउटा एक्स-रे कुकुर बनाउन अनिवार्य छ। यस्तो अवस्थामा, को निदान अक्सर पशु को मृत्यु प्रमुख, pneumothorax को पछि उद्भव समाप्त।
साथै, यो विधि त्यहाँ पाल्तु जनावर एक खतरनाक कुरा swallowed छ कि एक शङ्काको हुँदा प्रयोग गरिन्छ। तस्वीर सही चार-खुट्टे मित्र को जठरांत्रिय पर्चा मा एक विदेशी निकायको उपस्थिति वा अनुपस्थितिले देखाउँछ।
अन्य कुराहरु, को मेरुदण्ड को एक्स-रे कुकुर को यो सम्भव पक्षाघात, आघात मेरुदण्ड वा खोपडी को likelihood भविष्यवाणी बनाउँछ। साथै, अनुसन्धान यस प्रकारको क्यान्सर र गम्भीर फोक्सो रोग वा हृदय को समसामयिक पहिचान गर्न अनुमति दिन्छ। संग थपिएको को articular बैग, पेट वा मृगौला को malfunctioning गर्न क्षति साँचो कारण स्थापित गर्न contrasted गर्न सकिन्छ।
कि पूर्व-उपचार आवश्यक?
विशेष अवस्थामा बाहेक रोगी Shaggy को शरीर विपरीत एजेन्ट प्रबन्ध गर्न गर्दा कुनै अतिरिक्त manipulations सञ्चालन पर्दैन। प्रक्रिया अघि, खुवाउनुभयो र एक enema के छैन। यो सम्भव interferences समाप्त र एक स्पष्ट चित्र प्राप्त गर्न।
दुर्लभ परिस्थितिहरू, हुँदा, आक्रामक स्नायु वा धेरै सक्रिय व्यवहार समयमा तोकिएको 600 1500 मा rubles देखि भिन्न मान जो एक roentgen कुकुर, जनावर कुल छोटो एनेस्थेसिया प्रबन्ध छ। तर यो मालिकहरूको सबैभन्दा स्वतन्त्र आफ्नो पाल्तु जनावर राख्न सक्षम छन्, किनभने धेरै विरलै हुन्छ।
यो निदान कसरी सुरक्षित छ?
धेरै पाल्तु जनावर मालिकहरूले एक्स-रे कुकुर आफ्नो पाल्तु जनावर स्वास्थ्य नोकसान पुग्छ भन्ने विश्वास र यस्तो अध्ययन गर्न सहमत अत्यन्तै हिचकिचाउने। वास्तवमा, स्थिति केहि फरक छ।
एक्स-रेज छोटो विद्युत छालहरू, उच्च तीव्रता र प्रवेश डिग्री द्वारा विशेषता हो। यी गुणहरू मार्फत "ज्योति" जनावर को शरीर र सबै अदृश्य परिवर्तन पहिचान गर्न अनुमति दिन्छ।
एक्स-रे कुकुर हानि भनेर विश्वास गर्नेहरूले लागि यस्तो निदान सामान्यतया कमजोर विकिरण प्रयोग गरिन्छ भनेर बुझ्न पर्छ। र यसको प्रभाव यो बस छैन गम्भीर हानि पनि लघु जनावर कारण सक्षम छ भनेर छोटो छ।
उदाहरणका लागि, मा एक्स-रे प्रकाश कुकुर प्राकृतिक विकिरण प्रभाव अन्तर्गत पाँच दिन प्राप्त हुनेछ जो कि बराबर छ विकिरण को एक खुराक गर्न subjected। फलस्वरूप, निदान विधि कुनै पनि गम्भीर विकृति को कारण हुन सक्छ। साथै, एक्स-रेज सधैं बाहिर विशेष सुरक्षा को प्रयोग संग लगे छन्।
तर अनुसन्धान प्रदर्शन गर्न इन्कार थप गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ। यस्तो बिरामी-गर्भधारण समाधान पशुचिकित्सा को फलस्वरूप समसामयिक स्वास्थ्य समस्या चार खुट्टे रोगी र उपयुक्त उपचार पहिचान गर्न सक्षम हुनेछ।
"Ekzekan" कुकुर को लागि: निर्देशन, वर्णन, मूल्य
फिन क्षय हुनु: सामान्य जलजीवालय पेरोक्साइड मा उपचार
प्लेट संधारित्र र यसको उपकरण
Longsliv के हो? यो सुशील लामो आस्तीन संग टी-शर्ट!
Soloist "स्लट" Daria Stavrovich: तस्बिर र जीवनी
क्लीयोपेट्रा Hermes होटल3* (टर्की, Alanya): होटल को वर्णन, मूल्यांकन
Gnedich कवि Nikolai Ivanovich: जीवनी, रचनात्मकता र रोचक तथ्य
हानि र एस्पिरिन को लाभ - के थप? एस्पिरिन रगत thinners - लिइरहेको जस्तै